Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Ao amin'ny Sandals Resorts no ilainao dia ny fitiavana
Sandals Resorts any amin'ny Resorts Caribbean dia manome fialan-tsasatra am-pitiavana tsara indrindra ho an'ny mpivady mifankatia.
Ankafizo ny fialan-tsasatra an-tsakany sy an-davany tsara indrindra ao amin'ny Sandals Resorts any Karaiba ary jereo ny antony anoloran'izy ireo fialan-tsasatra feno fitiavana ho an'ny mpifankatia miaraka amina fampidirana kalitao bebe kokoa noho ny fialan-tsasatra amoron-dranomasina lafo vidy rehetra.
Sandals Resorts dia manolotra fonosana feno indrindra sy feno indrindra eran'izao tontolo izao.
Afaka mankafy morontsiraka fotsifotsy kanto ireo mpivady, fisakafoana Global Gourmet ™ misy kintana 5, trano hipetrahana, toaka tsy misy fetra, fanatanjahan-tena mahaliana ary maro hafa.
Sandals no orinasa lehibe indrindra manerantany mandritra ny 25 taona misesy avy amin'ny World Travel Awards.
Alao an-tsaina ny fahatongavanao ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny tokana ao amin'ny seranam-piaramanidina, nesorin'ny fitaterana niandry ianao, ary niditra tao amin'ny trano fandraisam-bahiny izay nampidirina tanteraka ny zava-drehetra. Alao sary an-tsaina ny fahalalahana mandeha any amin'ny trano fisakafoanana misy fialan-tsasatra ary mankafy izay tadiavin'ny paleta, miditra amin'ny hetsika izay tsy mitaky anao hisintona ny karatrao amin'ny banky na manao sonia kiheba, ary tsy misy ny kajy ny tendrony na fanomezana. Izany no fahafinaretana madio amin'ny fialan-tsasatra ekena rehetra. Ary amin'ny Sandals, manjaka tampoka ny rehetra.
Ny fitsangatsanganana amoron-dranomasina Sandals dia mipetraka eo amoron-dranomasina mahavariana amin'ny enina amin'ireo nosy tropikaly mahafinaritra indrindra any Karaiba, faritra malaza amin'ny fasika fotsy tsy manam-petra, ny rano turquoise mahafinaritra ary ny masoandro am-pitiavana. Hatramin'ny gadona reggae mafana an'i Jamaika ka hatrany amin'ny daroka sarotra vitan'i Bahamas ary avy amin'ny fiandrianana volkanikan'i Saint Lucia ka hatrany amin'ny fitaoman'i Antigua hafahafa.
Toeram-pisakafoanana miavaka indrindra any Karaiba
Ny Sandals dia manana trano honenana be indrindra izay nieritreretan'izy ireo ny zava-drehetra mba hahatonga ny fialan-tsasatra tonga lafatra ho an'ny mpivady mifankatia. Manomboka amin'ny villa Over-the-water mahatalanjona sy efamira amoron-dranomasina mahatalanjona misy fomba fijery 180 degre, ka hatrany amin'ny Skypool Butler Suites misy dobo tsy manam-petra sy Rondoval Suites tsy manam-paharoa, ny Sandals Signatureomodations dia azo antoka fa hampiakatra ny fifankatiavana amin'ny haavony vaovao.
Nosy ivelany manokana
Miaraka amin'ny Sandals irery ny mpitsidika ny Nosy Offshore dia mahazo fialan-tsasatra tropika 2 amin'ny vidin'ny iray. Any amin'ny Sandal Royal Caribbean ary Sandals Royal Bahamian minitra vitsy monja avy eo amin'ny toeram-pitsaboana lehibe.
Dobo mahavariana miaraka amin'ny rivotra romantika
Ankafizo ny fandriam-pahalemana mangatsiatsiaka amin'ny Sandols manaloka dobo. Mangalà fotoam-piaraha-mientana mangina eo afovoan'ny fiadanan'ny pisinin-dranomasina malalaka, mankafy ny herin'ny fisotroan-drano misy lozantsika, na miaina ny hakanton'ny dobo fidiran-tsika izay fon'ny fonenanay. Ny dobo tsirairay avy dia samy manana ny mampiavaka azy ary ny maro amin'izy ireo dia dingana vitsivitsy miala amin'ny ranomasina fotsiny.
Fampakaram-bady sy tantely ao amin'ny Resorts Romantic indrindra eto an-tany
Any Sandals, miavaka sy manokana ny tantaram-pitiavan'ireo vahiny… ary ny mariazin'izy ireo koa. Izany no antony nanoloan'izy ireo ny fonosana fampakaram-bady ho an'ny mpandahatra ny fampakaram-bady, ary nahatonga ny fanandramana manokana ho lasa manokana. Ny fanampiny rehetra dia nampiana mba hahatonga ny andro manokana ho miavaka kokoa. Lazao amin'i Sandals ny nofinao, ary hovelomin'izy ireo izany.
Ny fonosana fialan-tsasatra rehetra an'ny Sandaly dia misy: